Ndeapi Mhando dzeNhepfenyuro SEO Dzakasipo?
Tisati tatanga kutarisa kuti sei SEO isina kushanda, ngatitsanangurirei kuti SEO yakaipa ndeyei.
Maitiro eNegative SEO
Zvichingoisa pachena, SEO yakaipa isarudzo yezvakaipa zvinoshandiswa pakuderedza nzvimbo yako mumigumisiro yekutsvaga. Iyi miedzo yakaipa inotorwa pa webhusaiti yako inowanzosiya-peji, zvinoreva kusanzwisisika kwekuvakwa kwechikwata kune site yako.
Kunyange zvazvo SEO yakashata isiri iyo inowanzokonzera madonhwe emvura, zviri nani kuti iwe uzive nzira yekutsanangurira kana mumwe munhu ari kukuvadza nzvimbo yako nemaune.
Negative Off-peji SEO
Negative off-peji SEO inoreva SEO iyo inoshandisa webhusaiti yako pasina kupinda mukati mayo. Heino mhando yezvinhu zvakajairika maumbirwo asina kunaka-peji SEO inotora:
Pane mikana shoma yokuti dzimwe sangano re spammy zvinokuvadza rankings site. Zvisinei, kana zvasvika pakubatanidza mapurazi, ipapo mikana yekurwisa yakawedzera.
Sekutonga, vazhinji vevashandisi veshecker vanoshandisa magwaro akafanana anchor. Izvi zvinokodzera zvigaro zvingave zvisingabatanidzwi newebsite yepamusoro iri kurwiswa kana kusanganisira chinyorwa chinokosha chekuita kuti purogiramu yechipangidziro yezvinyorwa ione seyo muridzi ari kuishandisa.
Kuchengetedza kurwisa kwakadaro, kazhinji chengetedza kukurudzira kwako kufanana.
SEO SpyGlass chinhu chinogona kukubatsira nezvo sezvo ichikupa iwe kufambira mberi mairafu maviri:
Nhamba yekutaura nzvimbo;
Nhamba yezvibatanidza mumaprofita ako.
Chidimbu chisina kujairika mune chimwe chezviitiko zviviri izvi chikonzero chakakwana kuti utarise kune hutano huchangobva kuwanikwa.
Imwe nzira nzira yekukwikwidza inogona kukuvadza nzvimbo yako ndeyokunyora uye kuenzanisa zvaunenge uchiita kune mamwe mawebsite. Izvi zvinoshanda sezvinotevera: apo injini yekutsvaga inowanikwa zvakafanana kune mamwe mawebhusayithi akawanda, inotora shanduro imwe chete kuti iite. Kunyange zvazvo injini dzinotsvaga dzichikurumidzira kuziva iyo yepakutanga, pane nguva dzose nzvimbo yezvisizvo.
Kana uchida kuve nechokwadi chekuti zvinyorwa hazvinyorwa nezvimwe nzvimbo, zvino zviri nani kuti uzviongorore nguva dzose neCopyscape tool iyo inogadzirisa zviitiko zvehuwandu hwekuverenga. Muchiitiko chaunowana mifananidzo yakatsvaga yehupenyu hwako, taura ne webmaster uye umukumbire kuti abvise chikamu.
Nhamba yepamusoro peji SEO
Nhamba yepamusoro peji SEO kurwisa kunosanganisira kuvhara mu webhusaiti yako nekuchinja zvinhu zvakapoteredza. Pane nzira dzakaoma kushandisa pane peji-peji SEO kurwisa. Nheyo huru yeOO inopisidzira kurwisa kwehacker inogona kuisa inosanganisira:
Nzira inotevera inonetsa kuona. Kazhinji, mutengesi anowedzera spammy content kune site. Sezvo izvozvo zvibatanidzwa zvinowanzovanzwa, hazvizozvioni kunze kwekuti iwe uongorore code.
Chimwe chinogona kunge chakaipa se SEO mamiriro ezvinhu apo apo anorwisa anogadzirisa mapeji ako, achiisa zvakare kumapeji ake ewebhu. Vamwe vagadziri vepanzvimbo vanoshandisa nzira iyi kuti vawedzere PageRank yavo pachavo kana kuti vatungamirire vashandisi panzvimbo yavo pavanoedza kuwana yako. Kana mitsva yekutsvaga ichiwana pamusoro pekudzorera mberi iwe usati waita, ivo vangangodaro vachinyorera zvidzidzo zvenyu zvekuendesa kune imwe yenjodzi yewebhu. Nguva dzose magwaro ekuongorora mabhuku ane sarudzo seWebSite Auditor ndiyo nzira yakanakisisa yekuona maitiro aya.
Kuwana Zita De-kukanganiswa
Unogona kushamisika, asi kuchinja kuduku mufaira. txt inogona kuparadza yako yese SEO yekugadzira urongwa. Mutemo unoregererwa ndeye zvose zvinotora kuti utaure injini yekutsvaga kuti usateerere nhumbi yako zvachose. Kusuruvara asi chokwadi.
Nenzira yakanaka, pane chimwe chinhu chaunogona kuita kudzivirira tsika yakadaro. Nguva dzose kuongororwa maitiro kuchakubatsira iwe wekutanga wokuziva kuti iwe unofanirwa kuti iwe wekushandisa unyore-kunyorwa. Rank Tracker ibasa guru raunogona kushandisa pane purogiramu yekuongorora cheki. Nguva iyo nzvimbo yako yepaiti inononoka kubva kuGoogle 'zvabuda, uchaona Dhiyabhorosi inonzi Kusiyana koromo. Zviri nyore sezvazviri Source .